'सुरक्षा थ्रेट'रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओली यति एअरको अन्तिम सिटमा - Dainik Online Dainik Online
‘सुरक्षा थ्रेट’रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओली यति एअरको अन्तिम सिटमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार पोखरामा छन्।
आफ्नो समूहका गण्डकी प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नका लागि ओली त्यहाँ पुगेका हुन।
प्रधानमन्त्री ओली आज दिउसो यती एयरलाइन्सको विमानबाट पोखरा गएका थिए।
पोखरा विमानस्थलमा पुगेपछि उनलाई गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एवं सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीले स्वागत गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्दै। तस्बिरः राधिका कँडेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार पोखरा महानगरपालिका३, नदीपुरमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शिलान्यास समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै । तस्बिर : वासुदेव पौडेल
दिउसो कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूमाथि ठूलो ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको समेत खुलाए। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई भने, ‘तपाईंहरू अनौठो नमान्नुहोला, यदी ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने अनौठो नमान्नुहोला,’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि ओलीले राजीनामा दिन अझै आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।
‘सुरक्षा थ्रेट’ साँच्चिकै थियो भने भ्याली बाहिर जान प्रधानमन्त्री ओलीले आज सरकारी हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्न सक्थे। तर, उनी सर्वसाधरण नागरिकले झै आवतजावत गरिरहेका छन्। यति एअरको अन्तिम सिटमा आज देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो तस्विरले ओलीमाथि कुनै सुरक्षा थ्रेट नरहेको पुष्टि हुन्छ।
पार्टीको कार्यक्रममा जानको लागि सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा विरोध हुनसक्ने सायद ओलीले महसुस गरेको हुनसक्छन्!
ठूलो सुरक्षा घेरामा बसिरहने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कहाँबाट सुरक्षा थ्रेट भयो? कि प्रधानमन्त्री ओलीले रोइलो मात्रै पोखेका हुन? आफूप्रति ‘सेन्टिमेन्ट’ बढाउन ओलीले यसो भनेका हुन सक्छन्?
देशको कार्यकारी प्रमुखले नै असुरक्षित महशुस गर्छ भने यो देशमा सर्वसाधारणको अवस्था के होला? मानिसहरुले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन्।
सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कुनै ‘सुरक्षा थ्रेट’ नरहेको प्रष्ट पारेको छ। हाल ओलीको सुरक्षामा ९० जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।
सवारी, कार्यालय तथा निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरु अत्याधुनिक हतियार सहित ओलीको सुरक्षामा खटिन्छन्। उनीमाथि सुरक्षाथ्रेट नरहेको बताउँदै सुरक्षाअधिकारीहरु ओलीले किन आफू मारिन सक्ने बताए भन्नेबारे छक्क परेका छन्।
सुरक्षा मामिला सम्बन्धी जानकारहरु देशकै कार्यकारीमाथि आक्रमण भएको नेपालको इतिहास नरहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘गैरजिम्मेवार’ र ‘हावादारी’ भनेका छन्।